Wargeyska The Independent: Maxamed Morsi ‘waa la dilay’ | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wargeyska The Independent: Maxamed Morsi ‘waa la dilay’
Wargeyska The Independent: Maxamed Morsi ‘waa la dilay’
Saraakiisha ammaanka dalka Masar ayaa lagu eedeeyay inay dileen madaxweynihii hore ee dalkaas, Maxamed Morsi, qaar kamid ah qaraabad iyo ehelka madaxweynaha ayaa sheegay in booliska ay ku guuldarreysteen in gurmad deg deg ah ay u fidiyaan markii uu madaxweyanaha taagnida ka dhacay xilli ay socotay dhageysiga dacwaddiisa maxkamad ku taalla magaalada Qaahira, sida uu qoray wargeyska kasoo baxa Ingiriiska ee The Independent.
Ciidammada ilaalada xabsiga ayaa lagu eedeeyay in aysan wax dan ah ka gelin hoggaamiyihii 67 jirka ahaa uu suuxsanaa in ka badan 20 daqiiqo inkasta oo qaar kamid ah qareennadii maxkamadda joogay ay ku baaqeen in loo gurmado.
Morsi ayaa waxaa uu qabay xannuunada sokorta, dhiig karka iyo xaannuun beerka ah, waxaana loo hesytay eedeymo ah inuu tageerayay dowlado shisheeye iyo ururro maleeshiyaad ah.
Dhanka kale, xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Masar ayaa beeniyay eedeymahaas isla markaasna ku andacooday in Maxamed Morsi durbadiiba loo qaaday isbitaalka halkaas oo markii dambe uu ku geeriyooday, waxaana la rumeysan yahay inuu u geeriyoday wadno xannuun.
Qaramada Midoobey iyo urarrada u doodo xuquuqul insaanka ayaa waxay ku baaqeen in baaritaanno madaxbannaan lagu sameeyo sababtii ka dambeysay geerida ku timid Morsi iyo xaaladihii uu la kulmay intii xabsiga lagu hayey.Wargeyska ayaa sidoo kale ku warramay in qaar kamid ah qoyska iyo qareennadii u doodeysay Maxamed Morsi loo oggolaaday inay tagaan goobtii lagu aasayay Morsi balse aanan loo ogolaan in wax baaritaanno ah ay ku sameeyaan meydka.
Cabdullaahi Al Xadaad oo aabihiis iyo walaalkiis ay kamid ahaayeen dadkii la taagnaa maxkamadda Maxamed Morsi ayaa sheegay in goob joogayaal ku sugnaa maxkamadda ay u sheegeen in qofna uusan wax gurmad ah u fidin markii taagnida uu ka dhacay.
“Waxaa uu suuxsanaa in muddo ah ilaa ay ka yimaadeen ilaalada xabsiga, gaariga gurmadka deg deg ah ayaa yimid 30 daqiiqo kaddib, dadkii kale ee la xirnaa ayaa qeyliyay, waxaa kamid ah dadkaas, dhakhaatiir, waxay ka codsadeen ciidammada ilaalada xabsiga inay gurmad deg deg ah u fidiyaan Morsi , waxay arrintaasi ay aheyd mid loo qasday” ayuu wargeyska The Independent u sheegay, Cabdullaahi Al Xadaad.
Waxaa uu sheegay in hadda uu u cabsi qabo aabihiis oo loo diiday inuu maro qalliin dhanka wadnaha ah inkasta oo marar badan uu ku dhacay wadno xannuun tan iyo markii la xiray aabaha Cabdullaahi.
Qof u dhaqdhaqaaqo xuquul insaanka ayaa wargeyska sidoo kale u sheegay in booliska aysan wax gurmad oo deg deg ah aysan u fidin Morsi markii uu suuxay ilaa 20 daqiiqo kaddib.
Dr Camr Darrag oo ahaan jiray wasiirkii xiriirka caalamiga ee dowladda Morsi ayaa The Independent u sheegay in Maxamed Morsi looga tagey qolkii uu ku xirnaa muddo nus saac ah isaga oo suuxsan isla markaasna uusan wax daweyn ah intii uu xabsiga ku jiray.
“In ka yar 10 qof ayaa loo ogolaaday inay ka qeyb galaan aaska Maxamed Morsi, mana jirin baaritaanno madaxbanaan oo lagu sameeyay meydka” ayuu yiri Camr Darrag oo ku sugan Turkiga.
Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda Masar wax jawaab ah kama aysan bixin markii loo bandhigay eedeymahan loo jeediyay dowladda ee ka dhanka ah Madaxweynihii hore ee Masar, Maxamed Morsi.
Ha’yadda Human Rights Watch waxay ku tilmaantay geerida Morsi ‘Masiibo’, waxay sidoo kale sheegtay in xubno ka tirsan qoyska Morsi ay u sheegeen inuu la daalaa dhacayay xannuunka macaanka kaddib markii wax daawo aanan la siin.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Maxamed Morsi nin ‘Shahiiday isla markaasna ku eedeeyay dilkiisa hoggaamiyeyaasha kalitaliska ah ee Masar.
Maxamed Mursi waxaa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee si dumuquraaddi ah loogu doorto dalka Masar, balse hal sano oo kaliya yuu hayey talada dalkaas ka hor inta aanay ciidamadu xukunka ka tuurin 3-dii bishii July sannadkii 2013-kii.
Previous articleMacallin gabdhaha u dadaalay oo deegaanka Soomaalida Kenya laga aqoonsaday
Next articleBerbera, Daawo Odayaal dhaqmeed iyoDhalinyaro Bariga saxil ah oo taageeray Boqoe Buur Madow